China Potassium Persulphate Ukwenziwa kunye nefektri | FIZA
Igama lemveliso: I-Potassium Persulphate
Inkangeleko: umgubo crystalline
CAS HAYI: 7727-21-1
I-EINECS Hayi: 231-781-8
Ifomula yeMolekyuli: K2S2O8
Ikhowudi ye-HS: 28334000
I-Potassium persulphate yicrystalline emhlophe, umgubo ongenanukisi, ubuninzi be-2.477. Inokubola malunga ne-100 ° C kwaye inyibilike emanzini hayi kwi-ethanol, kwaye ine-oxidation eyomeleleyo. Isetyenziselwa ukuvelisa isixhobo sokucoca ulwelo, i-bleacher, i-oxidant kunye ne-initiator yePolymerization. Inenzuzo ethile yokuba phantse ibe ye-non-hygroscopic yokuba nozinzo lokugcina olufanelekileyo kubushushu obuqhelekileyo kunye nokuba lula kwaye kukhuselekile ukuphatha.
I-chloride kunye neChlorate (njengeCl)
Isinyithi esinzima (njenge-Pb)
1. Polymerization: Initiator for the emulsion or solution Polymerization of acrylic monomers, vinyl acetate, vinyl chloride etc. and for the emulsion co-polymerization of styrene, acrylonitrile, butadiene njl njl.
2. Unyango lwesinyithi: Unyango lwemihlaba yesinyithi (umzekelo ukwenziwa kwee-semiconductors; ukucoca kunye nokutsalwa kweesekethe eziprintiweyo)
3. Izinto zokuthambisa: Into ebalulekileyo kwimixube engemnyama.
4. Iphepha: ukuguqulwa kwesitashi, ukuphindaphinda kwephepha elinamandla.
5. Impahla eyolukiweyo: Iarhente enqwenelekayo kunye nesixhobo sokwenza iblitshi - ngakumbi iblitshi ebandayo.
①25Kg zeplastiki ephothiweyo ibhegi
Bag 25Kg PE ibhegi
Egqithileyo Isodium Persulphate
Okulandelayo: Ukuvavanywa komlilo kuKratshi